Izindaba - Iloli Lekhemikhali Yokusebenzisa Isifutho Somiyane |I-Longray Fogger
Manje lokhu kungomunye wemibuzo evame ukubuzwa njalo lapho umuntu ezwa ukuthi kuzofuthwa omiyane endaweni yangakubo.Njengoba lezi zifutho seziyinto evamile njengoba zonke igciwane leZika, i-West Nile fever kanye nezinsongo zomkhuhlane wodenga zintanta, ngacabanga ukuthi kungaba inzuzo ngathi ukuthola ukuthi yini ngempela amaloli omiyane afuthayo nokuthi angasithinta kanjani.
Ngokuvamile, Kokubili ama-Larvicides kanye nama-Adultcides asetshenziswa lapho ukufuthwa komiyane kwenzeka kunoma iyiphi indawo.Lelisu alisetshenziswanga nje kuphela ukuqeda bonke omiyane abadala endaweni ukuze kungabi bikho amathuba okuthi ulunywe wumiyane kodwa kuphinde kukhishwe izibungu zomiyane ukuze kungabikho omiyane abalindele ukuvuthwa. dala izinkinga eziningi.
Ukufafaza kwenzeka kusihlwa noma ekuseni njengoba lezi kuyizikhathi lapho omiyane besebenza kakhulu.
Imaphi amakhemikhali empeleni asetshenziswa amaloli omiyane?
Elinye lamakhemikhali asetshenziswa kakhulu emshinini wokugaya inkungu noma lawo enziwa emotweni noma ngezinyawo iZenivex.
Lesi isibulala-zinambuzane esisebenzayo esiqondise omiyane abadala.Ngaleso sizathu, imvamisa isetshenziswa kanye ne-larvicide.Kuyisixazululo senkungu esekwe kuwoyela esingasetshenziswa ezindaweni zasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya njengoba sigunyaziwe ukuthi sisetshenziswe nasezitshalweni zezolimo.
Isithako esiyinhloko esisebenzayo ku-Zenivex i-etofenprox, i-adulticide, okuyisibulala-zinambuzane esiqondise ezinambuzaneni ezindala ngokuphazamisa isimiso sazo sezinzwa lapho zihlangana nekhemikhali, ekugcineni zibangele ukufa.
Uma isifutho sesomile, asibi yingozi ezidalwa eziphilayo njengezinyosi nezinja futhi (nokho-ke, sinobuthi obukhulu ezinyosini nakwezinye izinambuzane eziwusizo ngesikhathi sokufafaza).
Izinhlelo zokufafaza omiyane nazo zisebenzisa izixazululo ezisekelwe ku-permethrin, okungesinye isibulala-zinambuzane esihlala isikhathi eside futhi esiphumelelayo.Inobuthi obuncane ezinyonini, ezinjeni nakubantu futhi ithi thizeni inobuthi emakati.Inobuthi obukhulu ezinambuzaneni ezizuzisayo nasezintweni eziphila emanzini.
Yini okufanele uyenze lapho ukuchelela kuhleliwe?
Zonke lezi zixazululo, kungakhathaliseki ukuthi i-permethrin-based, i-Zenivex, noma isibulala-zinambuzane esihluke ngokuphelele sisatshalaliswa ngosizo lwe-ultra-low volume (ULV) fogger ekwazi ukuguqula isixazululo samanzi sibe yinkungu enhle kakhulu, okuvumela ukugeleza kwamanzi. isixazululo sezinambuzane ukungena kuyo yonke imifantu emincane lapho omiyane bevame ukucasha khona.
Vele, noma iyiphi insecticide isewushevu, ngakho-ke uma ufuna ukuqiniseka ngokuphelele ukuthi wena nomndeni wakho kanye nezilwane ezifuywayo aniwuphefumuli, ngizophakamisa:
==>Vala amafasitela nezicabha zakho uma ukuchela kuhleliwe.
==>Kufanele futhi ugcine izilwane ezifuywayo endlini.
==>Hlala njalo umboze izidleke zakho zezinyosi kanye namachibi ezinhlanzi njengoba lezi zibulala-zinambuzane ziyingozi kakhulu ezinyosini nasezimpilweni zasemanzini.
Kodwa-ke, abantu akufanele ngempela bakhathazeke ngokufuthwa komiyane ngoba akuzona nje lezi zibulala-zinambuzane ezigunyazwe i-USA Environmental Protection Agency kodwa futhi ngenxa yokuthi umthamo wezibulala-zinambuzane ezisetshenziswayo empeleni mncane kakhulu.Futhi-ke, isifutho somiyane asiyingozi kangako kunalokho umiyane obungakwenza kuwe uma ubungakuluma futhi ukuthelele ngesifo.Ngakho, nakuba abanye bengase bakhathazeke ngokuthi lezi zifutho ziyingozi, iqiniso liwukuthi zithinta ukuphila kwethu kuphela ngendlela enhle.